Man United oo raacda xoogan ugu jirta sida ay ku heli laheyd xiddig ka tirsan kooxda Barcelona – Gool FM
Dajiye June 11, 2020
(Manchester) 11 Juun 2020. Kooxda Manchester United ayaa waxay muujisay sida weyn ay u xiiseeneyso xiddiga ka tirsan naadiga Barcelona ee reer Spain Ansu Fati, waxaana sida ay sheegayaan wararkii u dambeeyay, Barca ayaa iska diiday dalab weyn.
Warbixintan ayaa lagu sheegay in kooxda Manchester United ay miiska u saartay dhigeeda Barcelona qiimo dhan 100 million euros, si ay ugu guuleysato helitaanka adeega Ansu Fati, laakiin maamulka Barcelona ayaa iska diiday dalabkaas.
Si kastaba ha noqotee, kooxda Red Devils ma joojin doonto riyadeeda ku aadan inay hesho saxiixa Ansu Fati, waxayna diyaar u tahay inay sara u qaado qiimaha dalabka, inkastoo kooxda reer Catalonia ay u aragto laacibkeedan inuu yahay mustaqbalka kooxda, isla markaana aysan ku habooneyn inay iibiyaan, balse haddii ay mid ka mid ah kooxaha doonaya go’aansato inay bixiso qiimaha lagu kansali karo qandaraaskiisa uu gaarsiisan yahay 170 million euros.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Manchester United ay la xiriirtay dhowr isbuuc ka hor wakiilka Ansu Fati ee Jorge Mendes, si ay kaga wad hadlaan suurtogalnimada ay kaga iibsan karaan Barca.
Dhinaca kale wargeyska “Sport” ayaa wuxuu tilmaamay in Man United aysan wali ka niyadjabin heshiiskan, isla markaana ay sii wadi doonto raacdada ay ugu jirto adeega Ansu Fati, maadaama ay diyaar u tahay inay ka soo gudbiso dalab xoogan.
Inkastoo ciyaaryahanka uu ku faraxsan yahay kooxdiisa Barcelona islamarkaana uu doonayo in xilli ciyaareedkiisa uu ku soo gabagabeeyo sida ugu fiican ee ugu macquulsan.
“Marcus Rashford wuxuu ku guuleysan doonaa abaal-marinta Ballon d'O” – Luke Shaw